ကူးစက်သူနဲ့ ထိတွေ့မှု ရှိပြီး ၁၄ ရက်ကြာတာတောင် Q ဝင်ဖို့ လာမခေါ်နိုင်တော့တဲ့ အဖြစ် - Zet Star
ကူးစက်သူနဲ့ ထိတွေ့မှု ရှိပြီး ၁၄ ရက်ကြာတာတောင် Q ဝင်ဖို့ လာမခေါ်နိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်
ကိုယ်တိုင် ကြုံနေရတဲ့ Covid ဒုက္ခလေး အကြောင်း ပြောပြချင်လို့
9 ရက်နေ့က ကျနော်တို့ ရုံးက ကားဒရိုင်ဘာ တယောက် P ထိ တယ် ဘယ်က ထိခဲ့လဲတော့ မသိပါဘူး ဒါပေမယ့် Contact ဖြစ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ Q အကုန်ဝင်ရမယ်ပြောတယ် Primary. Secondary ခွဲလားမေးတော့ အကုန်လုံးက Primary ပဲ အကုန် ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ အိမ်ကနေ လာခေါ်ရင် ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေ ထိတ်လန့် သွားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အထုတ်လေးထဲ လိုတာတွေထည့်ပြီး ရုံးမာလာစောင့်နေတာ ကျနော် အပါအဝင် ၈ ယောက် အကုန်လုံး အထုပ်လေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ရောက်လာကြတယ်
P ဖြစ်တဲ့လူနဲ့ ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာလဲ ပြန်တွက်ကြည့်တော့ 4.9.2020(သောကြာနေ့ထဲက) အဲ့တာနဲ့ ညနေလာခေါ်မယ်ဆိုတော့ စောင့်နေတယ် လာမခေါ်ဖြစ်ဘူးတဲ့ အဲ့တာနဲ့ နောက်တနေ့လဲ လာမခေါ်ဘူး ဒီလိုနဲ့ နေ့တိုင်း ဖုန်းဆက်မယ် လာခေါ်မယ် ပြင်ထားပါ ပြီးရင်လာမခေါ်ဖြစ်ပြန်ဘူး မြို့နယ် ကျန်းမာရေး တိုင်းကျန်းမာရေးကို ဖုန်းဆက်တယ် Q Center မလောက်ငှလို့ပါတဲ့ အိမ်မှာနေနေတဲ့ ကျန်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကျတော့ လာခေါ်သွားကြတယ် ကျနော်တို့ ဆီကို ရောက်မလာဘူး
17 ရက်နေ့ညမှ လာခေါ်တယ်4ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းထဲက ထိတွေ့မှု မရှိခဲ့တာ 17 ရက်နေ့ ညမှ လာခေါ်တော့ မလိုက်ချင်တော့ဘူး ရဲတွေနဲ့အချေ အတင်ပြောတယ် ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ ပါ သက်သေရှိပါတယ် အရှေ့မှာ PPE နဲ့စောင့်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း အားနာပါတယ် တကယ် စုံစမ်းကြည့်တော့ လာခေါ်ခိုင်းတဲ့ အဖွဲ့ကလည်း ဘယ်သူ့အမိန့်နဲ့လာခေါ်မှန်းမသိဘူး သူတို့ကလည်း လာခေါ်ဆိုလို့ လာခေါ်တာပါတဲ့ နောက်မှ သိရတာက ရပ်ကွက်က လှမ်းခေါ်ပြီး ပို့ခိုင်းတာတဲ့
အဲ့တော့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းက လျစ်လျုရှုထားတာလား ဂရုမစိုက်တာလား ကျနော်တို့ ရုံးမာနေတဲ့ တပတ်လောက်အတွင်း အကယ်၍ ပိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘလိုလုပ်ရမလဲ ကိုယ့်ဟာကို လူသိမခံပဲ ကြိတ်ဖြေရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ရော ကျနော်တို့ ရုံးမာနေတဲ့ ကာလမှာ လက်လွတ်စပယ် မ​နေပါဘူး Q Center တွေမှာ ထားတဲ့အတိုင်း လေ့လာပြီး ပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီး Social Distance ထားပြီး နေထိုင်ပါတယ် တယောက်တခန်း နေတယ် အခန်းတိုင်းမှာ ရေချိုးခန်း အိမ်သာပါတယ် မနက်တခါ ည တခါ အပူချိန် တိုင်းပါတယ် အဲ့မှတ်တမ်းတွေ လာခေါ်တဲ့သူတွေကို ပြပါတယ်
သူတို့က မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ဌာနကို ဖုန်းခေါ်ပါတယ် နာရီဝက်လောက်ကြာပြီးနောက်မှ ရဲတွေက အင်အားသုံးပါတယ် လိုက်မလား မလိုက်ဘူးလားမေးပါတယ် ရဲအင်အားလည်း ထပ်ရောက်လာတယ် အဲ့တာနဲ့ အကုန်တော့ မလိုက်နိုင်ပါဘူး ဆိုတော့ Primary Contact နှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ အဲ့လူနှစ်ယောက်လိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဆိုပြီး ခေါ်သွားတယ် ခေါ်သွားတဲ့ နေရာက သင်္ဃန်းကျွန်း TTC ဟိုရောက်တော့ အခြေအနေမေးကြည့်တော့ အများသုံးရေချိုးခန်း အများသုံး အိမ်သာတဲ့ ကျနော်တို့ ရုံးက Q သဘောမျိုး ဘယ်နှရက်နေထားပါတယ်ပြောပြော သူတို့က လက်မခံဘူး 14 ရက်ထပ်နေရမယ် ပြောတယ်
အဲ့တာနဲ့ 20 ရက်နေ့မှာ Swab ယူတယ် အဖြေထွက်လာတော့ အဲ့နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက် P ဖြစ်နေတယ် ပထမ​တော့ သူက Contact မို့လို့လား ပေါ့ အကုန်လုံး အထင်က ရုံးမာနေနေတာ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အေးဆေးပဲ ဟိုရောက်လဲ ကျန်းမာတယ် P ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အထိ အနံ့အရသာ မပျောက်ဘူး ဒါဆို ဘယ်ကကူးတာလဲ နောက်တယောက် N ဖြစ်တယ် ၁ ရက်နေ့ဆို အိမ်ပြန်ရပြီ သူ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က စပြီး ဖျားနေတယ် ခုထိ အဖျား မပျောက်သေးဘူး သူ့ကို Swab လည်း ထပ်မယူဘူး နေကောင်းတာ သက်သာရင် ရပြီတဲ့ သူ့အတွက်ရော ဘလိုနားလည်ရမလဲ သူက ဘလိုစိတ်နဲ့ အဲ့ကနေ အိမ်ကိုစိတ်အေးချမ်းစွာ ပြန်ရမလဲ
နောက်ပီးတော့ ရုံးမာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၆ ယောက်ကို P ထပ်ဖြစ်လို့ Q ဝင်ရမယ်ပြောတယ် ခုထိ လာမခေါ်သေးပြန်ဘူး စကားမစပ် ပထမဆုံး P ဖြစ်တဲ့ ဒရိုင်ဘာက ဆေးရုံးပြန်ဆင်း Hotel Q ၇ရက်ဝင်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်ရောက်နေတာ ၂ ရက်ရှိပြီ ကျနော်တို့ ရုံးမာ သောင်တင်နေတုန်း
အဲ့တာ Q ဝင်ဖို့လာခေါ်ဦးမှာလား ဘယ်ချိန်ထိ မိသားစုနဲ့ဝေး ဒုက္ခတွေ ခံရဦးမွာလဲ အပြင်မှာရော နယ်မြေကျော်လို့ မရတော့ဘူး ဘလိုလုပ်ကြရမလဲ အကြံဥာဏ်လေးပေးကြပါဦး ကိုဗစ်မှာ ရောဂါ ဖြစ်လိုက်ရင်တောင် ခုချိန် အိမ်ရောက်လို့ မိသားစုနဲ့ အတူတူ ပြန်နေလို့​တောင် ရနေပြီ ဟူး…….
← အညာမြေမှ အောင်မြေနင်းပွဲ (သို့) ကိုဗစ်ကို အနိုင်တိုက်ခဲ့တဲ့ မြင်းခြံမြို့
ရန်ကုန်အတွက်ပဲ အဓိကမှာယူထားတဲ့ ကိုဗစ်အမြန်စစ်ကိရိယာတွေနဲ့ ဦးစားပေး စစ်ပေးမည့်သူများ →